Inqubomgomo Yemfihlo - BikeHike
Umbhalo ophakanyisiwe: Ikheli lewebhusayithi yethu lithi: https://bikehike.org.
Umbhalo ophakanyisiwe: Lapho izivakashi zishiya imibono kusayithi esiqoqa idatha ekhonjisiwe kwifomu lokuphawula, kanye nekheli le-IP lomvakashi nesicingo se-agent yomsebenzisi wesiphequluli ukuze usize ukutholakala kogaxekile.
Umbhalo ophakanyisiwe: Uma ulayisha izithombe kwiwebhusayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe ngemininingwane yendawo efakiwe (i-EXIF GPS) ifakiwe. Izivakashi ze-website zingalanda futhi zikhishwe noma iyiphi idatha yendawo kusuka ezithombeni kuwebhusayithi.
Umbhalo ophakanyisiwe: Uma ushiya amazwana kusayithi lethu ungakhetha ukugcina igama lakho, ikheli le-imeyli kanye newebhusayithi kumakhukhi. Lezi zenzalo yakho ukuze kungadingeki ugcwalise imininingwane yakho futhi uma ushiya elinye amazwana. Lawa makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Umbhalo ophakanyisiwe: Izihloko ezikulesi sayithi zingabandakanya okuqukethwe okufakiwe (isib. Amavidiyo, izithombe, izihloko, njll). Okuqukethwe okufakiwe okuvela kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngokufanayo ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele kwenye i-website.
Ubani owabelana ngemininingwane yakho
Umbhalo ophakanyisiwe: Uma ucela ukusethwa kabusha kwephasiwedi, ikheli lakho le-IP lizofakwa kwi-imeyili yokusetha kabusha.
Umbhalo ophakanyisiwe: Uma ushiya amazwana, ukuphawula kanye nemethadatha yayo kugcinwa kuze kube phakade. Lokhu kungukuthi singakwazi ukubona nokuvuma noma yikuphi ukuphawula okulandelayo ngokuzenzekelayo esikhundleni sokubamba emgqeni wokumodarela.
Umbhalo ophakanyisiwe: Uma une-akhawunti kule sayithi, noma ushiye amazwana, ungacela ukuthola ifayela elifakiwe lemininingwane yomuntu esiyibambe ngawe, kufaka phakathi noma iyiphi idatha oyinikezile. Ungase futhi ucele ukuthi sisuse noma iyiphi idatha yomuntu esiyibamba ngawe. Lokhu akubandakanyi noma iyiphi idatha esibophezelekile ukuyigcina izinjongo zokuphatha, zomthetho noma zokuphepha.
Umbhalo ophakanyisiwe: Amazwana wevakashele angahlolwa ngesevisi yokuthola ukugaxekile okuzenzakalelayo.